FAKAFAKA: Doka zary daka ! | NewsMada
Par Taratra sur 21/10/2020
Mila dokafana etsy sy eroa ve moa ny kolontsaina sy ny zavakanto? Eny, satria raha tsy izany, tsy malaza. Fa angaha ny fananana laza no tanjona? Tsia, ny fandraofana vola! Izany hoe, raha tsy dokafana ny zavakanto na kolontsaina iray, tsy hampidi-bola mihitsy? Rehefa tena zohina sy tomorona akaiky, fomba fanao avy any ivelany ny mandoka kolontsaina sy zavakanto. Tafiditra tao anatin’ny paikady nentin’ny mpanjakazaka an-tanin’olona niditra tany amin’ireo firenena nogiazany io. Nodokafan-dry zareo fatratra ny kolontsainy sy ny zavakanto nentiny… Roboka ny ampahany amin’ny Malagasy! Tao ireo nanary avy hatrany ny azy fa nisy koa ireo niezaka nisabaka. Niezaka nampifandray ny nentin’ny vahiny sy ny efa nisy teto.
Io vanim-potoana io no anisan’ny nandiavan’ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy lalan-tsarotra indrindra. Nofikirin’ny sasany mafy ireo izay tsara doka. Nodakany nataony langalanga ny mavon-drazana mitahiry ny momba azy manontolo. Nipoitra tsikelikely ny kisadasada manan-tsoratra rehetra teo amin’ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy. Nitsingilahila ny vatan-kolontsaina noho ny tsy fananana intsony fototra mazava…
Rehefa tsy voadoka, voadaka teo anoloan’ny Malagasy ny kolontsainy sy ny zavakantony. Izy tompony ihany io miezaka mandaka io. Nampiasainy nilolohavana ny an’ny hafa firenena ihany koa ny lohany. Izany hoe, ny tongotra sy ny lohan’ny Malagasy sasany mihitsy no niova. Niova lalan-kaleha, niova fomba fisainana!
Doka tokana monja dia efa nampivadika ny ampahana Malagasy. Tsy mahagaga raha anisan’ireo firenena mahantra sy fadiranovana i Madagasikara. Maro loatra ny nivadika amin’ny kolontsainy, amin’ny fomba amam-panaony, amin’ny zavakantony, sns. Ho an’ny mpahay toekarena, ny raharaham-barotra no mila sy ampiasana mafy ny doka. Ho an’ny fitantanan-draharaha, fampirisihana ny mpiasa hanao ny tsaratsara kokoa no anisany hampiasana ny karazan-doka samihafa… Fa ho an’ny kolontsaina sy ny zavakanto kosa, tena ilaina ve ny doka?